Waxay Ahayd In Jurgen Klopp Xabsiga Loo Taxaabo, Jose Mourinho Waa La Gowrici Lahaa Haddii Uu Samayn Lahaa Wixii Klopp Sameeyay. - Gool24.Net
Waxay Ahayd In Jurgen Klopp Xabsiga Loo Taxaabo, Jose Mourinho Waa La Gowrici Lahaa Haddii Uu Samayn Lahaa Wixii Klopp Sameeyay.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa biyo kulul ugu dhex jira qaabkii waalida ahayd ee uu u dhex orday Anfield iyada oo aan dhamaan ciyaartii kulankii kooxdiisa Reds ay guusha ka gaadhay Everton laakiin miyuu Klopp u qalmay in xabsiga loo taxaabo sida lagu sameeyo taageerayasha garoonka soo dhex orda ciyaarta oo socota?.
Xidigi hore ee xulka qaranka England ee Danny Mills oo la hadlayay BBC Radio 5 Live ayaa hiilfaha u qaaday Klopp wuxuuna tilmaamay in haddii wixii uu Klopp uu sameeyay uu Jose Mourinho samayn lahaa in la gowrici lahaa laakiin Danny Mills ayaa ku dooday in ay ahayd in Klopp xabsiga la dhigo.
Danny Mills ayaa isaga oo dhacdadii muranka badan dhalisay ee Klopp ka hadlaya yidhi: “Xaqiiqdii waa amakaag wixii uu isagu sameeyay. Isku tuur goobta tababarayaasha, ka bax goobta farsamada, la dabaal deg shaqaala haaga, taas gabi ahaanba wax dhibaato ah kuma qabo anigu”.
Laakiin xidigii hore ee xulka England ee Danny Mills oo ka hadlaya dhaqankii Klopp ayaa yidhi: “Laakiin in aad ku orodo garoonka dhexdiisa- haddii ay taageere ahaan lahayd dabcan waa la xidhi lahaa, waxaan filayaa in ay ixtiraam daro ku tahay Everton isaguna wuu ogyahay”.
“Haa waa derby , waa kulan wayn, laakiin ma awoodid in aad badhtamaha garoonka ku dhex orodid, daqiiqada ugu danbaysa ha haaato ama ayayna ahaane” ayuu Danny Mills hadalkiisa sii raaciyay.
Danny Mills ayaa intaa kadib isbarbar dhigay wixii lagu samayn lahaa Jose Mourinho haddii uu samayn lahaa ficilkii dhaqan xumada ahaa ee uu Klopp garoonka ku dhex orday iyada oo aan ciyaartu dhamaan.
Danny Mills oo wixii dhici lahaa haddii Mourinho uu falkan samay lahaa ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan jecelahay in Jurgen Kloppp uu taas dhibaato ugu jiri doono. Haddii ay tababaryaasha kale taa samayn lahaayeen isla markaana mid gaar ah ayaan oganahay (Mourinho)-Xaqiiqdii isaga waa la gowrici lahaa”.
Jurgen Klopp ayaa sheegay in uu Everton raali galiyay markii uu la hadlayay Marco Silva laakiin tababaraha Everton ayaa beeniyay in uu raali galin ka helay Klopp. Hadda Jurgen Klopp waxa uu sugayaa waxa ay noqon doonto jawaabta xidhiidhka kubbada cagta ee England.